OK$ - ကျွန်ပ်တို့အကြောင်း
OK$ ဆိုတာ ဘာလဲ ?
OK $ ဆိုသည်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ၂၄ နာရီ ၇ ရက်ပတ်လုံး တိကျမှန်ကန် လျှင်မြန် စိတ်ချစွာဖြင့် အလွယ်တကူ ငွေပေး၊ ငွေချေမှု ပြုလုပ်နိုင်သော ဖုန်းဖြင့် ငွေပို့စနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေပါက ကျသင့်ငွေ ဘောင်ချာများ ၊ ဈေးလျော့ငွေ ကူပွန်ကဒ်များနှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းပုံများကို သင့်ဖုန်းထဲတွင် အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပေးသည့်အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်များကို သိရှိလိုပါက www.okdollar.com ထဲသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
OK$ အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ ?
OK $ အသုံးပြုရန်အတွက် OK $ Application များကိုအောက်ပါနေရာများတွင် ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးပါက အကောင့်ဖွင့်မည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ မဖြစ်မနေထည့်ရမည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီး OK$ အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
OK$ အကောင့်ထဲသို့ငွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ?
OK$ သည် ငွေထည့် ၊ ငွေထုတ်ရန် လွယ်ကူဆုံးလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါနေရာများတွင်ငွေထည့်နိုင်ပါသည်။
OK $ အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသလား ?
OK$ အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဘဏ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ OK$ Application ကိုအသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းငွေပေး၊ ငွေချေလုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
OK$ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘာကြောင့်အသုံးပြူရန် လိုအပ်ပါသလဲ ?
ဖုန်းဆင်းကဒ် /ဖုန်းနံပါတ် သည် သင့် OK$ အကောင့်အတွက် အဓိကသော့ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်တို့မှ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိပါသည်။
=> မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်း (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်)
=> မိုဘိုင်း ဘရောက်ဇာ (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်)
=> ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်)
=> SMS စာတို (အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရန် မလိုပါ။)
OK$ အကောင့်မှတ်ပုံတင်မထားသောသူကို ငွေပေးပို့၍ ရနိုင်မလား?
သင်ပေးပို့၍ မရနိုင်ပါ။ OK$ အကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းအချင်းချင်းသာ ပေးပို့၍ ရနိုင်ပါသည်။ OK$ အကောင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက် ငွေပမာဏ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ OK$ အကောင့်ကို ၆လအတွင်း အသုံးမပြုပါက သင့်ဖုန်း OK$ ထဲရှိ ငွေပမာဏလက်ကျန်ငွေများ ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မည်။
OK$ အကောင့်ထဲတွင် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်ထိ အနည်းဆုံး သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသလဲ ?
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ OK$ အကောင့်တွင် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်မရှိ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
OK$ အကောင့်ဖွင့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်အခိုးခံရလျှင် သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် သင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ ?
သင့် OK$ အကောင့်ကို အလွှဲသုံးစားလုပ်လျှင် ဖြစ်စေ အကောင့်ပိတ်သွားလျှင်ပင် ဖြစ်စေ OK$ call center (+95 930000066, +95 9450144455, +95 1377888) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ www.okdollar.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်ပိတ်ထားပါသည်။
အကောင့်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
OK$ အပလီကေးရှင်းကို ဖွင့်ပါ။ အကောင့်ထဲဝင်ပြီး သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်လျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြချက်များ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။
ငွေပေး/ငွေလွှဲ : မည်သူမဆို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လျှင်မြန်စွာ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
နံပါတ်မပေါ်ငွေပေး : ဘက်စ်ကား၊ ရထား၊ သင်္ဘော၊ ဈေးဆိုင် စသော ငွေပေးချေမှု အတွက် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ မည်သူကိုမဆို ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရန် : ဘက်စ်ကား / ရထား / သင်္ဘော / ဝင်ပေါက် / ဂိတ်ကြေး / တက္ကစီ / စားသောက်ဆိုင် / ဟိုတယ် / ဓာတ်ဆီဆိုင် / ကားပါကင် တို့ကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ဈေးလျှော့ငွေ : စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရန် မိမိတို့ ဖောက်သည် လုပ်ငန်းရှင်များကို ဈေးလျှော့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လျှော့ဈေးငွေ ထုတ်ချေးသူသည် ကုန်သည်ဆိုင်များတွင် ဈေးလျှော့ငွေ ရွေးထုတ်နိုင်ပါသည်။
ဘောနပ်စ်ပွိုင့် : ကုန်သည်ဈေးဆိုင်တွင် OK$ အကောင့်အသုံးပြုသည့် ဖောက်သည်များ ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ရရှိပါသည်။ ဘောနပ်စ်ပွိုင့်ကို ကုန်သည်ဈေးဆိုင်များတွင် ရွေးထုတ်နိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းငွေဖြည့် : မိမိဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အခြားဖုန်းနံပါတ် ကို OK$ ဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။
အပလီကေးရှင်းသည် Telco ကို သိရှိနိုင်သည့် စနစ်ပါရှိသည်။ မိမိဖုန်းနံပါတ်အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ရန် OK$ အကောင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့် ငွေပမာဏသာ ရိုက်ထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘီလ်ပေးဆောင်ခြင်း : ဘီလ်များကို သွားရောက်ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ OK$ ဖြင့် လျှင်မြန်စွာ ဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ မီတာဘီလ် စသည်ဘီလ်များကို ကလစ်တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ငွေပေး/ငွေလွှဲ လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲ ?
OK$ အကောင့်မှ အခြားအကောင့်သို့ ငွေလွှဲပြောင်းရန် ၆စက္ကန့်သာကြာပါသည်။
OK$ အကောင့်မှ အခြားအကောင့်သို့ ငွေလွှဲပြောင်းနေစဉ်အတွင်း အသိပေးချက်ပေးပို့ပါသလား ?
ငွေပမာဏနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက် စာတို SMS ရရှိလိမ့်မည်။ အသိပေးချက်များ လက်ခံရရှိသူကို ပေးပို့လိမ့်မည်။
ငွေပေး ၊ ငွေချေမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကန့်သတ်ထားပါသလား ?
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အသုံးပြုလျှင် လုပ်ဆောင်မှု သုံးခုအတွက် စုစုပေါင်း ငွေပမာဏ ၁၀သိန်းအထိ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ မြန်မာဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်သည်အကောင့်အသုံးပြုလျှင် လုပ်ဆောင်ချက် အချိန်နှင့် ငွေပမာဏ အရေအတွက်သည် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။
OK$ ငွေသွင်း/ငွေယူရန် မည်သည့်နေရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း ?
OK $ အကောင့်ဖွင့်ထားသူတိုင်း ငွေသွင်း/ငွေယူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် OK $ အကောင့်တွင် အေးဂျင့်ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း စာရင်းမှ အေးဂျင့်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ငွေသွင်း / ငွေယူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ငွေသွင်း / ငွေယူ ပြုလုပ်၍ အနီးရှိဘဏ်များသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
သင့်မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကို မည်သို့ ငွေပေးပို့ရမည်နည်း ?
OK $ အကောင့်ကို ဖွင့်ပြီး သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၏ OK $ ဖွင့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်၍ ငွေပေးချမှု လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသူသည် SMS စာတို လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုနှင့်ဆိုင်သော အသိပေးချက်ကို ထိ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
နံပါတ်မပေါ်ငွေပေး ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါလဲ ?
နံပါတ်မပေါ်ငွေပေးဆိုသည်မှာ ပေးပို့သူသည် မိမိနံပါတ်ကိုလက်ခံရရှိသူအား မဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ OK $ အပီကေးရှင်းမှ ပေးပို့သူ၏နံပါတ်ကို မဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ နံပါတ်မပေါ်ငွေပေးသည် ငွေပေးချေသည့် ကုန်သည်၊ဈေးဆိုင် နှင့် သူစိမ်းများအားငွေပေးချေသည့်အခါ မိမိနံပါတ်ကိုမသိရှိစေလိုရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်းများနှင့် လက်ကျန်ငွေ ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ ?<
လက်ကျန်ငွေကို မြှားအဝိုင်းကိုနှိပ်၍ အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ “လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်း” များကို စစ်ဆေးလိုပါက “Report” ကိုနှိပ်ပါ။ OK$ အသုံးပြုသူ ရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် အသေးစိတ်များကို ပြင်ဆင်ချက် စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ချက် စာမျက်နှာကို ဖွင့်၍ လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်း နေရာသို့ သွားပါ။ ရက်၊ လ၊ ခုနှစ် အစီအစဉ်အလိုက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက် အသေးစိတ်အားလုံးကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ OK$ လက်ကျန်ငွေ စစ်ဆေးရန် မိမိလက်ကျန်ငွေကို ထိ၍ လျှို့ဝှက်နံပါတ် ရိုက်ထည့်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
လျှို့ဝှက်နံပါတ် ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ ?
OK$ အကောင့်ထဲသို့ဝင်၍ “ပြင်ဆင်ချက်” နှိပ်ပါ။ “လုံခြုံရေးအမျိုးအစား” ကိုနှိပ်ပါ။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အဟောင်းကိုရိုက်ထည့်ပါ။ မိမိပြောင်းလိုသည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် (သို့) Pattern https://www.messenger.com/t/dtherhtun လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးး အကောင့်ထဲသို့ပြန်ဝင်ပါ။
ဖုန်းငွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ ? မိမိဖုန်းထဲမှ အခြားဖုန်းထဲသို့ဖုန်းငွေဘယ်လို ဖြည့်ရမလဲ ?
OK $ App သည်မိမိဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း နှင့် အခြားဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည်။ ဖုန်းငွေဖြည့်သည့် နေရာတွင် “မိမိဖုန်း” နှင့် “အခြားဖုန်း” ၂မျိုးရှိသည်။ မိမိဖုန်းကိုငွေဖြည့်လိုပါက “မိမိဖုန်း” ရွေးပါ ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီး အလွယ်တကူငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ အခြားဖုန်းကိုငွေဖြည့်ပါက “အခြားဖုန်း” နံပါတ်အတည်ပြုရန် ၂ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပါ ငွေပမာဏရွေးချယ်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဘောနပ်စ်ပွိုင့် နှင့်ဈေးလျှော့ငွေ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ?
ဘောနပ်စ်ပွိုင့်ပေးသည့်ကုန်သည်များ၏ အမည်အလိုက် ဘောနပ်စ်ပွိုင့်အမှတ်များကို စုဆောင်းထားပေးသည်။ ကုန်သည်(ဘောနပ်စ်ပွိုင့်နှင့် ဈေးလျှော့ငွေအစီအစဉ်လုပ်ဆောင်ထားသူ)များမှငွေပေးချေမှုပြုလုပ်တိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အမှတ်များကိုလက်ခံရရှိမည်။
ကုန်သည်များသည် မိမိတို့၏ငွေပမာဏထဲမှ တစ်ကြိမ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်တိုင်းပေးမည့် ဘောနပ်စ်ပွိုင့် နှင့် ဈေးလျော့ငွေအတွက် သုံးစွဲမည့်ငွေပမာဏ ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ “ဘောနပ်စ်ပွိုင့်” ကိုနှိပ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက ဘောနပ်စ်ပွိုင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်သည်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဘောနပ်စ်ပွိုင့် သတ်မှတ်ချက်လုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ပြီးပါက SMS စာတိုအသိပေးချက် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေကိုင်အကောင့် ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ ?
လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေကိုင်အကောင့်သည် ကုန်သည်အကောင့်/ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နှင့်ပုံစံတူပြီး အောက်ပါအချက်များသာ ပုံစံကွာခြားသွားသည်
လုံခြုံစိတ်ချရသောငွေကိုင်များအတွက် သီးသန့်App တစ်ခုအသုံးပြု၍ အကောင့်ဖွင့်ရမည်။
အဓိကဖြစ်သည့် ကုန်သည်နံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေထည့်၍ အကောင့်ဖွင့်ရမည်။
ကုန်သည်၊ ကြိုတင်ငွေပေးမည့် ကုန်သည်၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေကိုင် ?
ကုန်သည် : ကုန်သည်အကောင့်ပိုင်ရှင်များသည် တခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်များထက် ထူးခြားသည့်အောက်ပါအခွင့်အရေးများပိုမိုရရှိသည်။
ဈေးလျော့ငွေ : ကုန်သည်ထံမှဝယ်ယူသူများ တိုးလာအောင် ဈေးလျော့ငွေက အထောက်အကူပေးပါသည်။
ပြန်အမ်းငွေ : ပြန်အမ်းငွေများသည် ကုန်သည်များသာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခွင့် ရှိသည်။ ကုန်သည်များ သတ်မှတ်ထားသည့် ပြန်အမ်းငွေများသည် x% ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ပြန်အမ်းပေးသည်။
လွယ်ကူစွာငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်တည်နေရာထည့်ခြင်း : ကုန်သည်များသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်း၊ ဈေးဆိုင်များကို အလွယ်တကူရှာနိုင်ရန်အတွက် ဆိုင်၏ တည်နေရာ များကိုထည့်ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် မိမိတို့ရှာဖွေသည့်ဆိုင်များ လုပ်ငန်းများကို နာမည်အလိုက် အမျိုးအစားအလိုက် အင်တာနက်ဖွင့်၍ မြေပုံပေါ်တွင်အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းများ : ပရိုမိုးရှင်းဆိုသည်မှာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း မြေပုံပေါ်တွင်မိမိတို့ရှာဖွေလိုသည့်ဆိုင်များ လုပ်ငန်းများကို တည်နေရာအတိအကျ၊ လုပ်ငန်း အမည်၊ ဆိုင်အမည် နှင့် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များနှင့်တကွဖော်ပြထားသည့်အတွက် အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်ငွေထုတ် : : ကုန်သည်များသည် ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ် လုပ်ရန်ဘဏ်/အေးဂျင့်ဆီသို့သွားရန်မလိုပါ။ OK$ ကိုအသုံးပြုဘဏ်မှတဆင့်ငွေများကို မိမိအကောင့်ထဲထည့်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြိုတင်ငွေပေးကုန်သည် : အခြားကုန်သည်များနှင့်အမျိုးအစားတူညီပြီး အောက်ပါအချက်များသာ ထူးခြားသည်။
ကြိုတင်ငွေပေးကုန်သည်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာရင်းငွေများကို စီမံခန့်အပ်နိုင်သည်။
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် OK $ နံပါတ် ၅ ခုကိုသာငွေပေးပို့နိုင်ပါသည်။ တခြားနံပါတ်ကိုငွေပေးချေ၍ မရပါ။
ကြိုတင်ငွေပေးမည့် ကုန်သည် : ယုံကြည်စိတ်ချရသောငွေကိုင်စာရေးများသည် ကြိုတင်ငွေပေးမည့် ကုန်သည်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကောင့်ဖွင့်ရမည်။
လုံခြံစိတ်ချရသော ငွေကိုင်သူ ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူမှ ငွေသွင်းကောင်တာသို့ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်သည့်စာရင်းကိုအတိအကျသိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေသွင်းငွေထုတ်သူများမှပေးပို့လိုက်သောငွေစာရင်းများသည် လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေကိုင်သူက ငွေထုတ်ခွင့်မရှိ ပိတ်ထားပြီး ကုန်သည်များသာ ငွေများကိုသွင်းနိုင်ထုတ်နိုင်သည်။
လုံခြံစိတ်ချရသော ငွေကိုင်သူသည် ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်သည့်အခါ စာတို/အသိပေးချက် များကို ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်သည့် ကုန်သည်များမှတဆင်လက်ခံရရှိပြီး ကုန်သည်များထံသို့လည်းတိုက်ရိုက်ရောက်သည်။
ကုန်သည်များသည် မိမိတို့အစီအစဉ်အတိုင်းအများဆုံးဝယ်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို လျှော့ဈေးငွေ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ OK $ မှအသိမှတ်ပြုထားသည့်ကုန်သည်စာရင်းတွင် ပါရှိသူများသာ သတ်မှတ်ထားသည့်ငွေပမာဏကို ထုတ်ချေးပေးနိုင်သည်။
ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ဈေးလျှော့ငွေ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲ ?
ကုန်သည်များသာ ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ဈေးလျော့ငွေ အကောင့်ထဲသို့ဝင်နိုင်သည်။
ကုန်သည်များသည်မိမိအသုံးပြုသော OK $ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့် ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ၊ ဈေးလျော့ငွေများကို Portal ထဲဝင်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကုန်သည်များသည် ဘောနပ်စ်ပွိုင့်နှင့်သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ငွေထုတ်ငွေချေပေးခြင်း နှင့် အချိုးအဆများကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ -
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက်များ ဝကျပ် - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ကြားငွေပေးချေမှုများအတွက် ၁၀၀ကျပ် နှင့် ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ၁၀မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၅၀၀၀ ကျပ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ၅၀၀ အမှတ်ပြန်လည်ရရှိမည်။
၆၀၀၀ ကျပ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ၆၀၀ အမှတ်ပြန်လည်ရရှိမည်။
၅၅၀၀ ကျပ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက ဘောနပ်စ်ပွိုင့် ၅၀၀ အမှတ်ပြန်လည်ရရှိမည်။
OK$ အပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်
အမှတ် (၂၆၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
WhatsAPP/Viber Phone : +95-9-454994404
စာအကျဉ်းချုပ် ပေးပို့ရန် !